Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Iqonga elitsha lolwazi lwentlalo olusungulwe nguDiem
IDiem, enye indlela yosasazo lwasentlalweni, isungula ukudala iindawo zentlalo yedijithali yabasetyhini kunye nabantu abangafanelanga ukunxibelelana namanqaku anomdla, ukujongana namava amabi abahlangana nawo kuthungelwano lwentlalo. Itekhnoloji yeDiem yamaziko oluntu unxibelelwano kunye nokwabelana ngolwazi oluyinyani, sisuka kulungelelwaniso, umxholo wokusebenza esimiselweyo ukuba sihlanganyele nawo kumajelo asekuhlaleni nakwindlela yokulingana, yamava obuqu apho ulwazi lolona hlobo lokugqibela lwemali yentlalo.
Idiem ibikwi-beta ukusukela ngeyoMqungu yowama-2021 kwaye yaqokelela uluhlu lwabantu abangaphezu kwama-20,000 100. Phambi kokukhutshwa kwayo esidlangalaleni, iDiem ibeke iliso ngononophelo ngaphezulu kwe-XNUMX + "Imikhosi yokuSungula" ukuba babelane ngamava abo kunye nokuqonda okufanelekileyo kunye noluntu olufanelekileyo, olusekwe kumdla ngaphakathi kweqonga ngokusebenzisa iifomathi ezihambelanayo kunye ne-asynchronous. Abantu kwiDiem baya kuba nakho ukufumanisa iiMikhosi ezivela kwiindawo ezahlukeneyo ezifana nabacebisi bezezimali, oosomashishini kunye nee-OBGYN. Imikhosi ikwabandakanya isuti yabakhokeli abakhokelayo, oosomashishini kunye neenkokheli zoluvo zeshishini kubandakanya uKirsty Godso, Sabia Wade, ULauren Maillian, noJaclyn Johnson, bonke abo bajoyine iBhodi yeNgcebiso yenkampani ukuyila elinye iqonga lezentlalo abafuna ukuzibandakanya kulo. UJohnson wabelana, "Kuyandivuyisa ukusingatha nokugcina imali kwiDiem, ngokwakha ishishini elijolise kubantu basetyhini ndiyasiqonda isidingo soluntu oluqinisekileyo lokuba abantu banxibelelane nabanye kunye neengcali kwindawo eyenzelwe bona."
Omnye wemigaqo-siseko yeDiem kukuba ungakhi itekhnoloji engeyomfuneko kunye neyokulutha, kuba ikamva leendaba zosasazo alikho malunga nokuqokelela iibhola zamehlo ngokwabelana ngentsebenzo. Imalunga nokwenza amaqonga aneemodeli zengeniso ezixhamla nabantu abafaka igalelo. Kwixesha elizayo, iDiem iceba ukwenza izinto ezintsha kwiteknoloji yakudala, enamacala amabini kunxibelelwano lwasekhaya kunye netekhnoloji yokubopha efumaneka kwimidlalo nakwi-AR / VR yokulima ngokwentlalontle ngokwenyani.
UMaitree Mervana Parekh, uMtyali mali eAcrew, uyacacisa, Nangona kunjalo, iteknoloji ebeka phambili ukubandakanywa kunye nokuzithemba akubanga phambili. Kungenxa yoko le nto ndonwabile ngeDiem. Kukunyanzela imida "yenethiwekhi yoluntu" kwaye uyile ngokwenyani, amava entlalontle ukusuka emhlabeni ukuya phezulu enza ukuba amalungu ayo aqhagamshele, atshintshisane ngolwazi, kwaye aphumelele ngendlela enenjongo kwaye ebandakanyayo. "
Sonke siyazi ukuba imithombo yeendaba zentlalo inempembelelo enkulu kwindlela esiphila ngayo, sisebenza kwaye sinxibelelana nabanye, ukanti, amaqonga anamhlanje aphezulu onke ayilelwe ngamadoda. Oko kuhlala kuthetha ukuba iinkampani zemidiya yoluntu ziyasilela kwimigaqo-nkqubo eyingozi kunye neyesini, ishiya indawo encinci kubafazi nakwabangengobambini ukuba babekho kwihlabathi elibonakalayo. Ingcali kwezoluntu, u-Abadesi Osunsade, uthi, “Njengowesifazane, amaqonga onxibelelwano asekuhlaleni aqale ukuziva exhaphaza, esikhuthaza ukuba sibe sesichengeni kwiindawo zoluntu ngenxa yothethathethwano. Idiem imalunga noluntu kunye nokunxibelelana kungekho i-ajenda efihliweyo. ”
Idiem iqengqelwa kuluntu kulo lonke u-Okthobha u-2021. Iqela elise-New York li-portstars inkampani ye-Techstars NYC '20, exhaswa yi- $ 900,000 kwinkxaso-mali yangaphambi kwembewu ngokuthatha inxaxheba kwiXfactor Ventures, Acrew kunye neengelosi eziphambili ezinje ngeYakha kwaye uhlakulele umsunguli , UJaclyn Johnson kunye noLawulo lwe-Discord, u-Amber Atherton.